Marvel အဆင့်လေးရုပ်ရှင်များကို San Diego Comic Con 2019 တွင်ကြေငြာခဲ့သည်
21 / 07 / 2019 21 / 07 / 2019 ဂရေဟမ် 1104 Views စာ0မှတ်ချက် Black ကမုဆိုးမ, ဓါးရွက်, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Fantastic Four, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 3, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Mutant, San Diego မှရုပ်ပြ Con 2019, San Diego မှရုပ်ပြ -con, SDCC, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, ထာဝရ, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး
San Diego ရုပ်ပြ Con 2019 ကာလအတွင်း, Marvel Avenger post-Endgame တွင်နောက်ထပ်ဘာများဖြစ်လာမည်ကိုစတူဒီယိုများကဖော်ပြခဲ့သည် Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ။
ကီဗင်ဖီးဂ်၊ ပြန့်ကျဲနေသောတာဝန်ခံ Marvel Cinematic Universe (MCU) သည် San Diego Comic Con 2019 တွင်ပြသခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်စီးရီးများ၏အနာဂတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - ယခုတွင်လည်းသေးငယ်သည့်မျက်နှာပြင်ပါအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်လာလိမ့်မည်။ အောက်ပါ Avengers: Endgame၊ ဇာတ်ကောင်အသစ်များသည်ရှေ့တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ရှိပြီးသားဇာတ်ကောင်များပိုမိုတက်ကြွလာမည်နှင့်ရုပ်ပြစာအုပ်ခေါင်းစဉ်များကိုဖန်သားပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မည်။ Lego Marvel ပရိသတ်များယခုလာမည့်အစုံအားဖြင့်မှုတ်သွင်းလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့တစ်သဘောမျိုးရပြီ ...
ပထမ ဦး စွာ၊ Feige သည် panel အတွင်းတွင်ကြေငြာခဲ့သောရုပ်ရှင်များဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာ Cate Shortland
ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၀ မေလ ၁ ရက်
Scarlett Johansson ၏ Black Widow ကိုတစ်ကိုယ်တော်ရုပ်ရှင်ရရန်အတွက်သေလုမျောပါးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ပရိသတ်များကမူဤသည် Avengers ရုပ်ရှင်မတိုင်မီသတ်မှတ်ထားသည့် prequel ဖြစ်လိမ့်မည်။ Florence Pugh, Rachel Weisz နှင့် David Harbour တို့သည်ဇာတ်ကောင်များကိုသရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး Taskmaster သည်လူကြမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဂျိုဟန်ဆင်ကစင်မြင့်ပေါ်၌သူမ၏ပြောကြားချက်ကိုပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကဒီဇာတ်ကောင်ကိုကျွန်တော်မကစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူမဟာသူမရဲ့ရှုထောင့်စုံနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သဘောပေါက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်ပါ။
ဖြန့်ချိသည့်ရက် - နိုဝင်ဘာ 6, 2020
Eternals ကို MCU တွင်မိတ်ဆက်ပေးပြီး E ၏ကာကွယ်သူများကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်artသူတို့ရဲ့ရန်သူများ, Deviants နှင့်အတူကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်မှဇ။ ကြီးမားသောသရုပ်ဆောင်များတွင် Richard Madden ကို Ikaris အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Angelina Jolie Thena၊ Kumail Nanjiani Kingo၊ Lauren Ridloff - Makkari၊ Brian Tyree Henry - Phastos၊ Don Lee က Gilgamesh၊
"ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်မသေနိုင်လောက်တဲ့ဒီအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကနေဒီဂြိုဟ်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့အချိန်အပေါ်လူသားနှင့်လူသားဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ပါ။ "
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့စွဲ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈
Simu Liu သည်ရုပ်ပြစာအုပ်ပရိသတ်များအားသိသည့် titular ဇာတ်ကောင်ကို Kung-Fu ၏မာစတာအဖြစ်သရုပ်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ Tony Leung သည်တကယ့် Mandari ကိုကစားမည်ဖြစ်သည်။ “ ကီဗင်နဲ့ဒီအသင်းကိုတွေ့ရတာအံ့သြစရာပဲart ဒီအခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့လှပတဲ့အရောင်တွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်မယ့် MCU ကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ် "ဟုဒါရိုက်တာဒန်နီယယ်ခရက်တန်ကပြောကြားသည်။ "သေးငယ်တဲ့ p ဖြစ်art ဒီဟာကကျွန်တော့်အတွက်တကယ်အထူးပဲ။ ”
အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း
Marvel Benedict Cumberbatch သည် Doctor Strange အားသူ၏ဒုတိယမြောက်တစ်ကိုယ်တော်ရုပ်ရှင်တွင်သရုပ်ဖော်ရန်အတွက်အဆင့်လေးရှိရုပ်ပြစာအုပ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်ခံထားသည်။ ကောင်းပြီ၊ သူတစ်ကိုယ်တော်အဲလစ်ဇဘက် Olsen ကသူကို Scarlet Witch အဖြစ်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ WandaVision streaming စီးရီးထဲကို ၀ င်ဖို့ခွင့်ပြုပေးလိမ့်မယ်။
ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Scott Derrickson က“ MCU ရုပ်ရှင်ကိုပထမဆုံးကြောက်မက်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတော့မှာပါ။
ဒါရိုက်တာ Taika Waititi
ဖြန့်ချိသည့်ရက် - နိုဝင်ဘာ 5, 2021
Chris Hemsworth သည် Thor အဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး Natalie Portman သည် Lady Thor ဖြစ်လာမည့် Jane Foster ကဲ့သို့သူမ၏အခန်းကဏ္prကိုပြန်လည်ဖော်ပြလိမ့်မည်ဟူသောအံ့အားသင့်ဖွယ်သတင်းနှင့်အတူ။ Tessa Thompson ရဲ့ Valkyrie လည်းပြန်လာလိမ့်မယ်။ Taika Waititi သည်လမ်းညွှန်သို့ပြန်လာနေသည်ဆိုသောကြောင့် Ragnarok နှင့်တူသော humourus လေသံရှိလိမ့်မည်။
Waititi မှ "ဒီဇာတ်လမ်းဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတယ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ချစ်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနှင့်ပထမဆုံးအမျိုးသမီး Thor ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း" ဖြစ်တယ်။
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက် - မသိပါ
Mahershala Ali သည် Vampire hunting Blade ကိုသရုပ်ဆောင်မည်။
Black က Panther 2
က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 3
ကပ္ပတိန် Marvel 2
Lego Marvel ပရိတ်သတ်များသည်မော်ဒယ်ဒီဇိုင်နာများအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
← Lego Star Wars 75252 လာမည့် Ultimate Collector စီးရီး set ဖြစ်နိုင်သည်
နယူး Marvel stream စီးရီးကို San Diego ရုပ်ပြ Con 2019 တွင်ကြေညာခဲ့သည် →